सुगर ड्याडीको अर्थ के हो ? थाहा पाउनुहोस् - pnpkhabar.com
You are at:Home»विश्व»सुगर ड्याडीको अर्थ के हो ? थाहा पाउनुहोस्
सुगर ड्याडीको अर्थ के हो ? थाहा पाउनुहोस्
By रिता घिसिंग on १८ भाद्र २०७५, सोमबार १०:०२ विश्व
बीबीसी : विश्वका धेरै मुलुकमा धनी र सम्पन्न व्यक्तिलाई सुगर ड्याडी बनाउने चलन तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ। सुगर ड्याडीको अर्थ के हो ? यसलाई बुझ्न त्यति सजिलो छैन।
विशेष गरी युवतीहरु पैसा कमाउन र मोजमस्ती गर्न पैसावाल व्यक्तिको खोजीमा हुन्छन्। जोसँग उनीहरुले समय पनि बिताउँछन् त्यस्ता व्यक्तिलाई सुगर ड्याडी भनिन्छ। सुगर ड्याडी बनाउने यो चलनले केन्यालाई चपेटमा लिएको छ।
यसलाई सेक्स कारोबारको नयाँ रुप पनि भनिन्छ। यसलाई अझै राम्रोसँग बुझाउनलाई तपाइँलाई हामीलाई इवासँग भेट भेट गराउँदै छौं। नैरोबी एभिएशन कलेजमा अध्ययन गर्ने १९ वर्षीया इवा आफ्नो सानो कोठामा बेचैन अवस्थामा देखिन्छिन्। उनीसँग मात्र १०० केनियाई शिलिङ मात्र छ। (केन्याको पैसालाई शिलिङ भनिन्छ) र उनलाई आगामी दिनको खर्चले सताइरहेको छ।
इवा तयार भएर बाहिर निस्किन्छिन्। बसमा चढेर उनी सिटी सेन्टर पुग्छिन्। जहाँ उनी आफूसँग यौन सम्पर्क गर्ने व्यक्तिलाई खोज्न थाल्छिन्। दश मिनेटभित्र एक जना पुरुष भेटिइन्छन्। जो इवासँग सेक्स गरेपछि १००० शिलिङ दिन तयार हुन्छन्।
इवाको भन्दा ठिक विपरित छ शिरोको जिन्दगी। शिरो ६ वर्ष पहिला युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्थिन्। त्यति बेला उनी १८÷१९ वर्षकी थिइन् होला। त्यतिबेला उनले एक जना विवाहित पुरुषसँग भेटिन्। जो शिरो भन्दा ४० वर्ष जेठो थिए। पहिलो भेटमा ती व्यक्तिले शिरोलाई राम्रो उपहार दिए। दुई वर्षसम्म सम्बन्ध राखेपछि शिरोलाई एउटा राम्रो अपार्टमेन्ट दिलाइ दिए।
चार वर्षभित्र शिरोकालागि उसले नियारी काउन्टीमा घरेडी किन्दिए। त्यस बापत उसले शिरोसँग चाहेको बेला सेक्स गर्न पाउँछन्। अब तपाइँले बुझिसक्नु भयो होला शिरोले आफ्ना लागि एक सुगर ड्याडी खोजिसकेकी छन्।
केन्याई समाजमा शिरो जस्ता युवतीको संख्या बढिरहेको छ। जो सामाजिक संजालदेखि लिएर बार, रेस्टोरेन्ट सबै ठाउँमा देखिन थालेका छन्।
युनिभर्सिटी अफ नैरोबीमा अध्ययन गर्ने सिलास नयानचावनी भन्छिन्, ‘शुक्रबारको राति युनिभर्सिटी होस्टलमा बाहिर हेर्नुस्, कसको कार आउँदैन, मन्त्री नेता सबैका चालक आएर युवतीलाई लिएर जान्छन्।’
यद्यपी अहिलेसम्म कति युवती सुगर ड्याडी रिलेशनमा छन् भन्ने कुनै आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन। तर बीबीसी अफ्रिकाकातर्फबाट बोसारा सेन्टर फर बिहेवयरियल इकोनोमिक्सले एक अधययन गरेको छ। जसमा १८ देखि २४ वर्षका २५२ छात्रा सहभागी भएका थिए। जसमध्ये २० प्रतिशत छात्राले आफ्नो सुगर ड्याडी भएको बताएका थिए। उनीहरुले आफ्ना २४प्रतिशत साथीको सुगर ड्याडी भएको पनि बताएका थिए।
यो स्याम्पस साइज निकै सानो छ तर, यसले केन्याली समाज परिवर्तनको संकेत भने गर्छ। उस्तै २० वर्षीया एक युवती छन्। उनको नाम जेन हो। जेनले आफ्नालागि दुई जना सुगर ड्याडी खोजेकी छन्। ग्रेजुएशनको अध्ययन गरिरहेकी जेनका अनुसार उनको टम र जेफसँग छुट्टा छुट्टै सम्बन्ध छ।
जेन भन्छिन्, ‘उनीहरुले सहयोग गर्छन्। तर सधैं सेक्सको सट्टामा होइन। कहिले काँही उनीहरुलाई कुरा गर्न र सँगै बस्न पनि कोही न कोही त चाहिन्छ।’ जेनका अनुसार उनले आर्थिक सुरक्षाकालागि यो निर्णय लिएकी हुन्। ताकि आफ्ना सानी बहिनीलाई सहयोग गर्न सकियोस्। यस्तै युवतीको कथालाई नैरोबी डायरी नामक रियालिटी टिभी शोमा देखाइँदैछ।
जेन जस्तै ब्रिजेट पनि हुन्। नैरोबीको गरिवी इलाका काइबेरामा उनी बस्छिन्। उनी पहिला घरका काम गर्थिन्। तर अब सामाजिक संजालमा निकै सक्रिय छन्। उनले आफ्नो एउटा सेक्सी भिडियो सुट गरेर सामाजिक संजालमा पोस्ट गरेकी छन्। त्यसपछि उनको फ्यान फलोअर्स निकै बढेका छन्।
त्यतिमात्रै होइन सुगर रिलेशनपछि उनको दुनिया नै परिवर्तन भएको छ। एक से एक महंगा कपडा र ब्याग उनीसँग छन्। उनी आफ्नो जीवनमा गुड लाइफको अनुभव गर्न चाहन्छिन्।
२५ वर्षकी ग्रेस पनि त्यस्तै युवतीको सूचीमा पर्छिन्। उत्तर नौरोबीकी ग्रेस सिंगल मदर हुन्। उनको सपना गायिका बन्ने थियो। उनी नाइट क्लबमा गाउँछिन्। उनी यस्तो पुरुषसँग सम्बन्ध बनाउन चाहन्छिन् जसले आफ्नो करियर परिवर्तन गर्न सहयोग गरोस्।
यद्यपी यस्तो चलनप्रति निकै प्रश्न पनि खडा भएका छन्। कतिपयले यस्तो संस्कृतिले महिला सशक्तिकरण हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरुले महिलाको शरीर पुरुषको आनन्दकालागि प्रयोग हुने गरेको तर्क गरेका छन्।